Ujeedadeenu waa in aan u adeegno dhammaan macamiisha ku kala abtirsada jinsiyada iyo wadamo kala duwan ee ay haysato dhibaato sharci, inaga oo siineyna adeeg macquul ah oo ay weheliso qiima jaban. SEELEY LEGAL SERVICES P.A waxaa la aasaasay sanadii 1990, waxaa albaabka u furay William Seeley.
Adeegyada Tarjamada Luuqada: Marka ay lagama maarmaan noqoto waxaanu heysanaa turjubaano si quman ugu hadla afafka sida: Lao, Hmong, Chinese, Vietnamese, Somali iyo Spanish. Waxaanu horumar la sameyney mawaadiniinta asalka ah ee ku hadla luuqadahaas, sidoo kale, waxay iyana yimaadaan xafiiskeena si ay noogu qabtaan adeeg tarjamo haddii loo baahdo.
William S. Seeley, Attorney at Law
Xirfad kooban: Waxa uu ka baxay Jaamacada Hamline ee Kuliyada sharciga sanadu markey aheyd 1980. Waxa uu sharcigiisa qareenimo ka qaatey gobalka Minnesota sanadii 1980 oo uu ilaa maantana ku shaqeeyo. Waxa uu shahaadadiisa 1aad ee heer Jaamacadeed ka qaatey Kolajka la yiraahdo Gustavus Adolphus, isaga oo ku takhasusay Speech Communication.
Waa xubin ka tirsan ururka Trial Lawyers Association. Waa madaxii tafatirihii hore ee jariidada Hamlina Law Review
Waxa uu ku sidkan yahay Kuliyada Carlson School of Management ee Jaamacadda Minnesota.
Waxa uu iska wax u qabso ugu soo shaqeeyey Peace Corps sanadihii (1966-68) ee wadanka India; waxaa uu ku safrey wadamo badan oo ay ka mid yihiin China, India, Japan, South Korea, France, iyo U.K. Laga soo bilaabo 1990 ilaa manta waxa uu madaxweyne ka yahay hay’adda sharciga ee Seelay Legal Services, P.A., taas oo ku hawl gasha dhinacyada sharciga ee dhaawaca shilalka ama khaaska, la talinta hay’adaha waaweyn iyo sharciga ganacsiga; qorshaha dhul gadasho iyo saami sharci. Seeley hore waxa uu ahaa qareen hay’ada Eastlund, Solstad iyo Hutchinson, Ltd law sanadihii 1980-90, waxa uuna aad ugu takhasusay sharciga ganacsiga, qandaarsyada, sharciga degaanka, la gorgortanka qoraalka amaaheed, iyo dhaawacyada shilalka ama khaaska.
SEELEY LEGAL WAXA AY KU TAKHASUSEEN DHINACYADA SHARCIGA:
Dhaawaca shilalka ama khaaska
Hanti qaansheegasho kaaga timaado ee shil gawaari
Sharci ganacsi iyo qawaaniin
Dhaxalka, maaleysi iyo saami sharci
Furiinka, taakulada qoyska iyo hanashada awlaada
Xadgudubka sharciga jidadka iyo DWI ( Sakhrada oo gaari ku wadid)
ARIMAHAN SOO SOCDA WAXA AY SI DHAB AH U QEEXAYAAN ADEEGYADA SHARCI EE AANU QABANO, KUWAAS OO KOR KU TAXAN. QANCINTAADA DARTEED WAXAAN ADEEGYADAN SHARCI EE QEEXAN KU TARJANEY LUUQADHA SOOMAALI, CHINESE IYO LAO.
DHAAWACA SHILALKA/ KHAASKA: Waxaanu masalnaa macaamiisha ku dhaawacanta shil gawaari, mooto, dhaawac dhicid ama simbaraxyo xun, dhaawac gubasho, ey ku qaniina, ama adiga oo lugeynaya gaari ku duqeeyo. Dhammaan kharashkeena shaqo waxa bixinaya darawalka kale ama ceymiskooda. Waxaanu ku sheeganaa 1/3rd (saddex meelood marka loo qeybiyo meel) taasi oo ay ka bixinayaan qeybta kale ama ceymiskooda.
HANTI QAANSHEEDASHO KAAGA TIMAADO EE SHIL GAWAARI: Waxaanu masalnaa macaamiisha gawaarida leh ee ay dhibaato shil ka soo gaarto darawalada kale. Waxa ay ku xiran tahay xaqiiqda xaalada taagan markaas, waxaanu kugu masali karnaa 1/3rd xubinimadaada heyadeena iyo qiimaha yaal ama saacad ahaan iyo qiimaha yaal markaas.
SHARCI GANACSI IYO QAWAANIIN: Waxaanu caawinaa macaamiisha ganacstada ee sameysanaya ganacsi cusub sida C,S ama Limited Liability corporation; diyaarinta heshiisyada iskaashiga, isku dubarida qoraal sharci ee sicir ama hanti ganacsi oo la sii iibin, diyaarinta qandaraaska, ijaarka rugaha ganacsiga iyo qoraalada sharciyo ee u baahan yahay ganacsi; tarjamada iyo diyaarinta heshiisyada aan u baahneyn in lala tartamo ama heshiis kale laga daba sameysto. Waxaanu ku masalnaa macaamiisha sharciga ganacsiga.
DHAXALKA, MAALEYSI IYO SAAMI SHARCI: Waxaanu caawinaa maamiisheena ku jira qorsha dhul, taas oo ay ku jirto nooca ugu wanaagsan ee dhaxal ama maaleysi uu ku qeybiyo qorshaha ugu yar ee macquulka ah ee uu canshuurta ku dhiibo, iyaga oo magacaabaya ruuxa u haraya hantida. Waxa ay ku xiran tahay baahidaada gaarka ah, waanu kuu qori karnaa qoraal khaas ah ee dhaxalka/maaleysiga sharcigiisa oo aad ku qeybineysid hantida dhulkaaga oo ku aad ku dhaxalsiineysid marwadaada/ odaygaaga, caruurtaada, ilmaha caruurtaadu dhalaan, meelaha aad sadaqada ku baxsatid…… iyo maal galin rabaayadaada aad jeceshahay haddii ay jirto.
FURIINKA, TAAKULEYNTA QOYSKA IYO HANASHADA AWLAADA: Waxaanu ogsoonahay in uu aad u xanuun badan yahay furiinka. Haddaba aanu ilaalino danahaaga gaarka ah xilliga adag ee aad qoyska kala maqan tihiin. Waxaanu qiimeyneynaa dakhligaaga/eeda, hantida, daryeelka lagaaga baahan yahay…… ama sharciyada xeerka qoyska kaaga baahan karaan…. Furiin aad heshid kaligaa, ama labada dhinac ka yimaada iyo awlaada hanshadeda ee daryeelka u baahan; iyo in aad bixisid taakulada qoyska oo macquul ah ( ama in aaney ku jirin ku tiirsanaan waxa ku taxaluqa waxbarshada iyo in aaney ku jirin wax aad horey u shaqeysatey/ ama ay u shaqeysatey); waxaanu si is le’eg u qeybinaa hantida idnka dhaxeysa.
SHARCIGA GURYAHA: Waxaanu diyaarinaa hawlaha heshiiska kala gadashada guryaha degaanka iyo ganacsigaba. Labadaba waanu qiimeynaa ama diyaarinaa heshishkooda iibka; waxaanu kuu masalnaa maalinta aad la wareegeysid, waxaanu la shaqeynaa qiimeeyayaasha go’aamiya qiimaha macquulka ah ee suuqa, haddii ay ahaan laheyd guryaha degaanka ama ganacsigaba; waxaanu kaa saacideynaa in aad heshid caymiska lahaanshaha gurigaaga, sidoo kale kuu qorno iyo in aanu kuu xafidno hawlahaada sharci xilwareejineed.
XADGUDUBKA SHARCIGA JIDADKA IYO DWI (sakhrada oo gaari ku wadid): Haddii lagu siiyo ticket DWI, ama traffic ticket, waxaanu kaala talineynaa arimaha la taxaluqa maxkamada, taas oo ku saleysan xaalada dhabta ah ee taagan, iyo wixii laysankaaga kuugu hormarey ee recordka kuugu jiray. Waxaanu kugu masali doonaa maxkamad kasta iyo sharci ee xaaladahaas aad ku jirtid, kolkaas oo aaney mudneyn in aad meel wax isla dhigtaan qareenka dowlada.
Haddii aad u baahan tahay su’aalo ku saabsan Legal services ay bixiyaan SEELEY LEGAL SERVICES, fadlan naga soo wac 612-379-2440 or naga soo e-mail garey seeleylegal@hotmail.com. Fadlan xasuuso: Ma bixin karno la talinta sharciga taleefanka ama e-mailka ilaa in aan wada galno heshiis aad nagu siineysid kharashka shaqo. Aad baanu ugu faraxsanahay in aan kaala hadalno khadka taleefanka xaalada baahi ee sharci ama soo e-mail garey haddii aad go’aansatid, waxaanu awoodi doonaa in xal u helno dhibaatadaada. Arinta si kastaba ha ahaatee, waxanu kaa dooneynaa in aad timaatid xafiiskeena, si aan u sameyno heshiis noo ogalaanaya in aan ku masalno, ama noqono qareenkaaga.
Waad ku mahasan tahay daneyntaada aad daneyneysid la talinta SEELEY LEGAL SERVICES, iyaga oo daboola baahida sharci ee kumanaanka ku nool nawaaxiga magaalooyinka mataanaha ah, ama gebi ahaan Minnesota, sidoo kale wixii ka baxsan gobalka macaamiishiisa ganacsi ama danaha gaarka ah ee Minneosta ilaa 1990.